Doorashada Gudoomiyaha Cusub waxa ay gogol xaar u tahay soo noqoshada C/raxmaan Faroole
Baarlamaanka Dowladda Puntland ayaa Gudoomiye cusub u doortay Siciid Xasan Shire, oo hore u ahaa wasiirka Xanaanada Xoolaha Dowladii Faroole, asagoo uga guuleystay xilkaan Gudoomiyihii hore ee Barlamaanka Puntland.
Codadka lagu kala guuleystay ayaa waxa ay ahaayeen mid aad u kala sareeya, ayadoo la kala helay 40 cod oo uu helay Siciid Cali Shire iyo 26 cod oo uu helay Gudoomiyihii hore C/rashiid.
Saadaasha codadkan ay bixineyso ayaa waxaa ka muuqata qaabka ay u dhici doonto doorashada Madaxweynanimada Puntland oo 8-da bishan la filayo, iyadoo la filayo in codadka uu helay Gudoomiyaa Cusub ay yihiin codadka u codeyn doona Madaxweyne Faroole, halka 26 cod ee soo hadhay ay yihiin codadka musharaxiinta kale.
Musharaxiinta kale ayaa maanta waxa ay garwaaqsandoonaan codadka ay kala heystaan inta ay le'eg tahay, maadaama maalmahan mid walbaa sheeganayay in uu cod ku dhawaad tobaneeyo ah amase dhaafsiisan uu heysto, tanoo gabagabadeedii maanta loo tagay, markii Gudoomiyihii hore oo ay dabada ka riixayeen maalmahan uu ku soo dhacay meel banaan, codadkii ay ugu yaboohayeena tiradeedii kusoo ururtay 26-cod.
Waxa la fishaa waa doorashada 8-Janaayo iyo sida codku ku soo idlaado, hadii uu ka duwanaanayo tirada maanta ee kala ah 40 v 26, amase uu wax ku kordhi doonaan 40-ka amase ka dhinmi doonaan.